सबैलाई चिसो रूसी जाडो त्यहाँ कसरी हुन थाह छ। यसलाई मा प्राण केही फूल पराउँछु विशेष गरी चाहनुहुन्छ यस समयमा थियो "तुरुन्तै अप खुसीले गदगद।" तर, सबै कुरा आफ्नो समय छ र प्रकृति को नियम परिवर्तन गर्न सकिँदैन - फूल मात्र वसन्त को आगमन संग देख्न सकिन्छ। तथापि, सबै फूल पहिलो ब्लूम के को एक आधारभूत बुझाइ छ। जवाफ नै सुझाव। वास्तवमा, अनुमान गर्न गाह्रो छैन। पहिलो फूल फक्रिएको बारेमा प्रश्न गर्न पनि छोराछोरी, तुरुन्तै snowdrops कि जवाफ दिन्छन्।
तर, एक वयस्क अनुरोध गर्न सक्छ, तिनीहरूले भर्ने मा, भन्छन्: "? त्यहाँ प्रारम्भिक snowdrops ब्लूम कि वनस्पति कुनै पनि प्रतिनिधि हुनुहुन्छ" अनि जवाफ केही छैन।
त्यसैले, थाहा छैन जो गर्छन् पहिलो फूल फक्रिएको के ती, यो जानकारी रुचि हुन सक्छ। सबै को पहिलो, यो Hinodoks (Chionodoxa)। जताततै अरू सेतो हुँदा यसलाई लेट हिउँदमा blooms। यसलाई उहाँले हिउँ महिमा नाम थियो यस कारण लागि हो। संयंत्र को Highlands मा बढ्छ। वरपरका चरम आल्प्स बैजनी, सेतो, बैंगनी र नीलो तन्तु blossoming आनन्द उठाउन सक्छौं। को परिष्कृत स्टेम मा नेत्रहीन Bells सदृश जो दस फूल, स्थित छ।
के पहिलो फूल थप ब्लूम छन्?
यो Erantise hiemelise (Eranthis hyemalis) उल्लेख छैन असंभव छ। यो प्रकृति को चमत्कार मह सुगन्ध exude कि पहेंलो फूल संग प्रसन्न छ। यसको फूल अवधि जनवरी र फेब्रुअरी छ। "ERANTHIS" भनिने फूल माथिको मान्छे। स्टेम छोटो लम्बाइ छ, र फूल तन्तु जमीन नजिक निकटता मा राखिनेछ। चिसो र हिउँ बोट बाट विशाल हरियो perianth सुरक्षित राख्दछ।
केही निस्सन्देह, सोध्न सक्छ "अनि फूल blooms कस्तो पहिलो," हामी जाल आइरिस (आइरिस reticulata) उल्लेख गर्नुपर्छ। यो रूसी क्षेत्रहरु को अधिकांश मा देख्न सकिन्छ। उहाँले yellowish र whitish रंग को blotches छ कि बकाइन तन्तु एक अद्भुत सौन्दर्य छ। यो फूल blooms पहिलो, र यो मार्च मा भइरहेको छ।
फूल को साँचो connoisseurs सुंदरता र शोभा र आइरिस जाल धेरै प्रजाति को सौंदर्य पूर्णता मनाउन। यी समावेश: सद्भाव - सेतो स्थलहरू एक फिक्का नीलो फूल र हर्कुलेसक्लस्टर - - पहेंलो पैच, Clarette संग नीलो पत्रदल छ यसको तन्तु हो बैजनी रंग एक कांस्य रङ्ग संग।
निस्सन्देह, यो पनि प्रारम्भिक ब्लूम हुन्, snowdrop र hellebore जस्ता फूल मा विस्तृत गर्न आवश्यक छ।
Snowdrop अक्सर प्रारम्भिक वसन्त मा पतन र तुसारो यो मर्दैन भनेर जाडो वर्षा लागि प्रतिरक्षा छ। यो बोट एक घण्टीको आकार जस्तै कि सेतो inflorescences छ। यो तन्तु बित्तिकै पहिलो पात देखा पर्ने ब्लूम गर्न थाल्छन्।
hellebore भनिन्छ फूल यसलाई च्यातेर नेत्रहीन रूपमा, उज्ज्वल सुन्दर फूल मात्र छ, तर मूल छोड्छ। फूल अवधि hellebore - प्रारम्भिक वसन्त। , रातो, गुलाबी, बुरगुण्डी, सेतो, पहेंलो: तन्तु विभिन्न रंग मा ब्लूम।
Phlox रोग: उपचार र रोकथाम
"Foppish" (मल): समीक्षा। जटिल मल: आवेदन
साधारण Ancistrus: प्रजनन र नीलो Catfish
को खिडकी मा चेरी टमाटर। कसरी खिडकी मा एक पट मा टमाटर बढ्न?
"Tienam" चिकित्सा। प्रयोगको लागि निर्देशन
उमेर Mayan र मिश्री पिरामिड
बीएसई, वा पागल गाई
Requisitioning - यो ... परिचय अधिशेष
खार्किव मानवीय शैक्षणिक एकेडेमी: संकाय, समीक्षा, ठेगाना
गोरुको मासु स्टेक: बरस रही र विशेष गरी खाना पकाउने डिग्री
कसरी मोजिला फायरफक्स देखि Webalta हटाउन: शुरुआती लागि निर्देशन